मोबाइल टेक्स्टि St कडा आउँदैछ! | Martech Zone
मोबाइल टेक्स्टि St कडा आउँदैछ!
शनिबार, मे 3, 2008 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 Douglas Karr
Wirefly भर्खर मोबाइल फोन प्रयोगकर्ताहरूको एउटा सर्वेक्षण गर्‍यो र पत्ता लगायो कि mess text% मोबाइल प्रयोगकर्ताहरूले पाठ सन्देश प्रयोग गर्दैनन्। जब म यो पोष्ट अनुसन्धान गर्दै थिएँ, म आश्चर्यचकित भए कि केहि साइटहरू थिए हैरान द्वारा संख्या.
हुनसक्छ म केही ब्लगरले टिप्पणी गरेको भन्दा उमेरको प्रयोगकर्ता हुँ, तर म विपरित कारणको लागि वास्तवमै छक्क परें। म आश्चर्यचकित भएको थिए कि वास्तवमा actually 65% ​​प्रयोगकर्ताहरू गरे पाठ सन्देश प्रयोग गर्नुहोस्। सायद यो मात्र हो कि म 40० बर्षको भएँ तर ... वास्तवमा? त्यो छक्कै परेको जस्तो छ कि telephone 35% टेलिफोन प्रयोगकर्ताहरूले कहिल्यै टेलिग्राफ मेसिन प्रयोग गरेनन्।
Mobile 35 प्रतिशत मोबाइल फोन प्रयोगकर्ताहरूले पाठ पाउँदैनन् किनकि उनीहरूले वास्तवमै पत्ता लगाउन सक्दछन् बोल्नुहोस् अर्को छेउमा भएको व्यक्तिसँग त्यो सानो सजिलो बक्समा वास्तविक समयमा। र त्यसो गर्न उनीहरूले आफ्ना औंवहरू क्रम्प गर्नुपर्दैन। अवश्य पनि, यदि तपाई कसैसँग सम्बन्ध विच्छेद गर्न चाहानुहुन्छ तर वास्तवमै तिनीहरूसँग कुरा गर्न चाहनुहुन्न भने पाठ्य सामग्री काममा आउँदछ।
म अवश्य पनि व्यंग्यात्मक छु, म पाठ पठाउन चाहन्छु। मेरा बच्चाहरूले उनीहरूका साथीहरूलाई अनन्तसम्म पाठ पठाउँछन् र म कृतज्ञ हुन्छु जब उनीहरूले मलाई कल नगरी मीटिंगमा टेक्स्ट पाठ गर्छन्। टेक्स्ट धेरै कम दखल छ र यो पर्याप्त तात्कालिक छ। र यो बढ्दो छ।
व्यवसाय केही समयको लागि मोबाइलको साथ के गर्न संघर्ष गरिरहेको छ। खाना सेवा उद्योगमा बज टेक्स्ट बेस्ड कूपनहरू र सतर्कताहरू कसरी जिम्मेवार संरक्षक हुन्। मैले एडम सानो, राष्ट्रपतिसँग भेटें अनुरोध बाट पाठ, यो बिहान र आदम पाइपलाइन तल आउँदै गरेको अत्यन्तै रोमाञ्चक चीजहरूमा काव्यमय बनायो।
अनुरोध द्वारा पाठमा पहिले नै मोबाइलको केहि रोचक प्रयोगहरू छन्। ती मध्ये एक म्याराथन प्रयोगकर्ताहरूलाई उनीहरूको दर्ता नम्बरमा पाठ राखेर उनीहरूको अन्त-समय प्रदान गर्दैछ। तपाईको पीसीमा समय हेर्न घर पुग्दा सम्म कुर्नु पर्दैन।
एडम एसएमएस बनाम MMS व्याख्या गर्न मा गयो। कहाँ एसएमएस (छोटो सन्देश सेवा) ले पाठको १ characters० क्यारेक्टरलाई पछाडि र पछाडि पठाउन अनुमति दिन्छ, एमएमएस (मल्टिमेडिया सन्देश सेवा) छवि, भिडियो र ध्वनिलाई पछाडि र पछाडि पठाउन अनुमति दिन्छ।
मोबाइल प्रदायकहरूले गतिको लागि आफ्नो नेटवर्कहरू बृद्धि गर्न जारी राख्ने क्रममा (उदाहरण: 3g, अनुवाद गरिएको = तेस्रो जेनरेशन) र मोबाइल फोनले उच्च रिजोलुसनको साथ आफ्नो स्क्रीनहरू बृद्धि गर्न जारी राख्दछ, यसले वास्तवमा बजार खोल्न सक्छ!
को लागी एक पाठ सन्देश पठाउन को लागी माछा धकेल्नुहोस् खाजा मा, हुनसक्छ तपाई ड्युटीमा प्रबन्धकबाट एक छोटो भिडियो पठाउन सक्नुहुनेछ वा थालको आफैंको एक महान भिडियो! तपाईं बारकोड टेक्नोलोजीमा भर्खरको प्रयोग गरेर अनुकूलित कुपन पनि पास गर्न सक्नुहुनेछ ताकि खुद्रा विक्रेताले कुपनको रिडिम गर्न फोनको अगाडि केवल पाठकलाई लहराउन सक्दछ।
आदमले केहि बढि उत्साहजनक प्रविधिहरू मसँग साझेदारी गरे जुन मसँग यहाँ बाँड्ने अनुमति छैन (अझै), तर म हेर्न र प्रयोगको लागि उत्सुक छु।
टेक्स्ट नि: शुल्क हुनु पर्छ?
मैले आदमलाई सोधें कि यदि उसलाई लाग्छ कि संयुक्त राज्य अमेरिकामा सन्देश पठाउन मूल्य निर्धारण हुन्छ (विदेशी टेक्स्टिंग प्रायः नि: शुल्क हुन्छ) र उनले भने कि आशा गर्दिन। तपाईंको इनबक्समा स्प्यामको भोल्युमलाई एक हेराईले व्याख्या गर्दछ किन ... यदि टेक्स्टिंगको लागि पैसा खर्च भएन भने, हामी बोल्दा हाम्रो फोनहरू भरिने छन्!
टैग: मोबाइल मार्केटिङमोबाइल एसएमएसएसएमएसएसएमएस मार्केटिंगपाठ सन्देश मार्केटिंगtexting
Douglas Karr Saturday, May 3, 2008 Sunday, October 4, 2015
संरक्षकले नयाँ वेब उपस्थिति शुरू गर्‍यो
मेरो धेरै ब्लग पोष्ट भर्बोज छन्
मई 3, 2008 मा 11: 58 PM
हो, हो, यद्यपि म यी गम्भिर बुढा व्यक्तिहरू मध्ये एक हुँ र म पाठको बाहेक मोबाईल प्रयोग गर्दिन - एउटा शिष्टाचारको रूपमा उपयोगी जुन प्राप्तकर्तालाई काम रोक्न र सुन्न आवश्यक पर्दैन, जब मलाई थाहा हुन्छ कि तिनीहरू छैनन्। ईमेल उपकरण नजिक ...
मई 4, 2008 मा 6: 55 एएम
यदि तपाईंको कम्पनीले मोबाइल सामग्री वा IM मा ध्यान केन्द्रित गर्यो भने, तपाईं आफ्नो सर्वेक्षण पाठ सन्देशको कम उपयोग झल्काउन चाहानुहुन्छ। तर सबैभन्दा पछिल्ला सीटीआईए को संख्या, एक पक्षपाती अन्तर्राष्ट्रिय संगठनले देखाउँदछ कि २262२ करोड अमेरिकी फोन मालिकहरु मध्ये १ 176 मिलियन भन्दा बढी पाठ सन्देश। केवल अमेरिकामा ,400,000००,००० भन्दा बढी।
अमेरिकामा टेक्स्ट सन्देश प्रवाह १ 151१% को दरले बृद्धि भइरहेको छ, to० देखि years 30 बर्ष उमेरकालाई १ 45०% को दरले बढ्दै छ।
प्रमुख अमेरिकी प्रदायकहरू मध्ये केवल mass ले हाल सामूहिक एमएमएसलाई अनुमति दिन्छ र प्रायः प्रमुख खेलाडीहरू उनीहरूको डाटा पहुँच बजारको विस्तारमा केन्द्रित छन् किनभने एमएमएस वितरण गर्ने चुनौतीहरूको कारण 3०% भन्दा कम छ।
डाटा पहुँच मोबाइल सामग्री मोबाइल मार्केटिंग को लागि भविष्य हो, तर शुद्ध संचारको लागि एसएमएस र पाठ मार्फत उपलब्ध अनुप्रयोगहरूको संख्या बढ्दै गयो।
हाल लगभग %०% अमेरिकी फोनसँग डाटा क्षमता छ तर करीव %०% ले यस सुविधालाई सक्रिय पार्न थप शुल्क तिर्दछ।
मई 4, 2008 मा 3: 52 PM
महान तथ्या !्क, रोबोएन! यी तथ्या share्कहरू साझेदारी गर्न समय लिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। म शीर्षकमा म के गर्न सक्छु भनेर जान्न नेट खोज्दै छु। सन्देश पठाउन निश्चित रूपमा बज छ, तर अझै पनी मुख्यधारको मार्केटिंग अपोप्शन प्राप्त गर्नका लागि एक तरीका छ जस्तो देखिन्छ। सायद यो वर्ष हो!